MacOS Catalina beta 6 dia manampy sary vaovao ao amin'ny HomeKit | Avy amin'ny mac aho
MacOS Catalina beta 6 dia manampy sary vaovao ao amin'ny HomeKit
Fangatahana nangatahin'ireo mpampiasa maro izay mampiasa ny Mac ho fitaovana lehibe indrindra amin'ny andavanandron'izy ireo. Raha ny marina dia nanantena izy ireo fa misy io fampiasa io ao macOS Mojave. Avy amin'ny macOS Catalina beta 6manana isika kisary bebe kokoa ao amin'ny HomeKit hikarakara ireo kojakoja samihafa ao an-tranonay.
Araka ny nambaranay tamin'ny fanombohana ny macOS Catalina beta 6, ny rafitra fiasan'i Apple dia voadio tokoa ary Apple dia manararaotra ireo beta farany farany ireo amboary ny bibikely ary asio fiasa vaovao. Fotoana ho an'ny mpamorona fitaovana. Tokony hojeren'izy ireo ny fomba fiasan'ny add-on azy ireo amin'ny HomeKit amin'ny Mac.
Ireo sary masina vaovao ireo no sambany nahitana azy ireo tao amin'ny rafitra fiasan'ny Apple. Raha ny marina, ity kinova vaovao an'ny HomeKit amin'ny Mac ity toa fampiharana vaovao sy manokana manokana ho an'ny Mac, izay fampifanarahana ny fampiharana iOS. Farafaharatsiny mba hampitahantsika azy amin'ny beta 7 an'ny iOS 13. Tsy fantatray raha ho hitanay amin'ireo sary miasa hafa ireo macona ireo sa te-hanavaka ny tenany i macOS.
Mamela ireto sary masina ireto manavaka ireo kojakoja samihafa amin'ny kilasy iray ihany. Ohatra, raha mampiasa HomeKit miaraka amin'ny jiro valindrihana sy ny jiro eo am-pandriana isika, ankehitriny noho ireo sary masina vaovao dia afaka manamboatra fanitsiana tsy miankina amin'ny fomba tsotra sy haingana isika, mamantatra mora ny singa tsirairay. Ohatra, ho an'ny lela fanaovan-jiro Hitantsika: Jiro valizy, jiro, jiro mitsangana, jiro LED na jiro birao.
Araka ny karazana plug, manavaka ireo karazany samihafa hitantsika eto amin'izao tontolo izao ireo sary masina. Amin'ity tranga ity, raha manana maro ao an-trano isika dia tsy maintsy manavaka azy amin'ny efitrano. Ary farany, momba ny mpankafy afaka mahita sary masina izay mamaritra ireto karazana manaraka ireto isika: latabatra, gorodona na valizy valindrihana. Ho hitantsika eo hoe inona ny fironana ao an-tsain'i Apple manoloana ity rindranasa HomeKit izay mihatsara fatratra tato anatin'ny volana vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Catalina » MacOS Catalina beta 6 dia manampy sary vaovao ao amin'ny HomeKit
Hahita Apple TV vaovao amin'ny volana septambra ve isika?
Tranofiara ofisialy voalohany an'ny andian-tsarimihetsika an'ny Apple's The Morning Show